यसरी रचनात्मक बन्दैछन् पाल्पा बराङ्दीका युवाहरु – Palpa Samachar
By Samacharpalpa	 On Aug 8, 2020
पाल्पा । बगनासकाली गाउपालिका वडा नं. ८ बराङ्दीका १९ वर्षीय बरुण बस्याल स्थानीय बेद युवा समूहका अध्यक्ष हुन् । २०७३ सालमा इन्सेकले पाल्पा जिल्लामा सञ्चालन गरेको इएलपि कार्यक्रम अन्र्तगत स्थानीय बेद माध्यमिक बिद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत युवाहरुबीच गठन गरेको बेद युवा समूहमा उनले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।
अध्यक्ष बस्यालले समूहमा आवद्ध भएपछि आफ्नो नेतृत्व बिकास त गरे नै । यो सँगै उनको समूहले खाली समयमा खेलेर डुलेर समय बिताउने अरु साथीहरुलाई पनि समूहमा आवद्ध गराए । अध्यक्ष बस्यालको नेतृत्वमा रहेको बेद युवा समूहले बराङ्दी, चापपानी र खानीगाउँका युवाहरुलाई समेटेर समुदाय स्तरमा रचनात्मक अभियानहरु चलाउँदै आएको छ । सुरुमा बिद्यालयबाट सुरु भएको यो समूहको गतिबिधि अहिले समुदाय स्तरका युवाहरुलाई समेत समेट्दै अगाडि बढेको छ ।
युवा समूहमा आवद्ध भएपछि आफ्नो मात्रै नभएर समूहमा आवद्ध सबै साथीहरुको राम्रो नेतृत्व विकास भएको समूहका सचिव जीवन न्यौपानेले बताए । “युवा समूहमा आवद्ध भएपछि धेरै कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमहरुमा बोल्ने र आफ्नो धारणा राख्ने अवसर प्राप्त भयो । अहिले धेरै नेतृत्व विकास भएको छ ।” उनले भने । इन्सेकले पाल्पा जिल्लामा स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही कार्यक्रम सुरु हुन भन्दा अगाडि यहाँका युवाहरु यसरी संगठित थिएनन् । कार्यक्रम सुरु भएपछि इन्सेककै पहलमा हामीहरु संगठित भए र रचनात्मक काम गर्न थालेका हौं । न्यौपानेले भने ।
युवा समूहले बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं. ८ बराङ्दी न्यौपाने डाडामा ३ रोपनी बारी भाडामा लिई सामुहिक अदुवा खेती गरेको थियो । अदुवा खेतीका लागि आवश्यक तालिम, मल, जग्गा भाडा वापतको रकम र ३ सय केजी अदुवाको बिउ बगनासकाली गाउपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो । अदुवा बिक्रीबाट आएको रकम ५० हजारबाट युवा समूहले समुदाय स्तरमा रचनात्मक अभियानहरु संचालन गर्दै आएको अध्यक्ष बस्यालले बताए ।
यसबाहेक युवा समूहले समुदाय स्तरमा हरेक बर्ष होली पुर्णिमाको अवसरमा साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा चेतनामूलक सडक नाटक प्रदर्शन, बिपन्न परिवारका बिद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री बितरण, कोरोना महामारी सम्वन्धी चेतना मूलक भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । युवा समूहले आगामी कार्यक्रम अन्र्तगत युवा समुहलाई संस्थागत गर्न गाउको बीचमा रहेको सामुदायिक भवनमा वडा कार्यालयसितको समन्वयमा कार्यालय तथा सूचना केन्द्र र पुस्तकालय संचालन गर्ने, युवा सरोकारका विषयमा अन्य सामाजिक अभियानहरु संचालन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष बस्यालले बताए ।
आफ्ना बिद्यार्थीहरुको यो अतिरिक्त क्रियाकलापबाट उनीहरुका आफन्त तथा शिक्षकहरु समेत खुशी भएका छन् । बेद माध्यमिक बिद्यालयका शिक्षक जगदीश बस्यालले पढाई लेखाईसँगै आफ्ना बिद्यार्थीहरुले यसरी समुदाय स्तरमा राम्रो काम गर्दै आएकोमा खुशी ब्यक्त गरे । उनले बिद्यार्थीहरुले राम्रा काम गर्दा सबैभन्दा बढी शिक्षकहरु खुशी हुने भएकोले अझ राम्रा कामहरु संचालन गर्न सुझाव दिए ।
यो युवा समूहले गर्दै आएको रचनात्मक कामहरुमा स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्दै आएको छ । बगनासकाली गाउँपालिका वडा नं. ७ की सदस्य रिता भट्टराई गाउँका युवा भाई बहिनीहरुले गर्र्दै आएको रचनात्मक कामले आफुहरु पनि खुशी भएको बताइन् । युवा समूहले गर्ने राम्रा कामहरुका लागि वडा कार्यालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने उनले बताइन् । यहाँका युवाहरुले नेपाल परिवार नियोजन संघ सितको सहकार्यमा बराङ्दीमा रहेको परिवार नियोजन क्लिनक भवनमा बगनासकाली युवा सूचना केन्द्र समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो केन्द्रमा युवाहरु समय समयमा भेला हुने र युवा तथा युवाहरुका युवाहरुका सवालमा छलफल अन्र्तक्रिया गर्दै आएका छन् । यो सूचना केन्द्रलाई आगामी दिनमा अझ ब्यवस्थित बनाउँदै यस क्षेत्रकै नमुना सूचना केन्द्रको रुपमा बिकास गर्ने योजना समूहको रहेको छ ।
तस्बिरः यु्वा समूह मार्फत भएको सामुहिक अदुवा खेतीको फाइल तस्बिर